स्मृतिमा सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ – बन्धु चन्द – eratokhabar
स्मृतिमा सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ – बन्धु चन्द
ई-रातो खबर २०७५, १६ जेठ बुधबार १८:२६ May 30, 2018 746 Views
२०३६/०३७ सालतिर हामी साना स्कुले विद्यार्थी थियौँ । त्यसबेलाका पाठ्यपुस्तकमा लेखिएका गीत, कविता, कथा, निबन्ध निकै रुचिका साथ पढिन्थ्यो । अझ गीत र कविताहरू त भाका हालेर गाउन र वाचन गर्न झनै रमाइलो हुन्थ्यो । त्यतिबेला पाठ्यपुस्तकभन्दा बाहिरका किताबहरू विरलै पाइन्थे । एक दिन मेरो हातमा ‘हटारु’ लेखिएको किताब (पत्रिका) प¥यो । यसका सम्पादक प्रकाशक को थिए, किताबले दिन खोजेको सन्देश के थियो ? त्यो बुझ्न मेरो बालमस्तिष्कले भ्याउने कुरै भएन । त्यसमा खुब रमाइला गीत, कविता, कथा र निबन्धहरू थिए । ती सबै खुब चाख लिएर पढेँ मैले । त्यसमा ‘मेरो साथी’ शीर्षकमा दायाँ छेउमा साना अक्षरमा ‘सेन’ लेखिएको कथा थियो । त्यो कथामा रोल्पाबाट दाङको महेन्द्र क्याम्पसमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न गएको एकजना विद्यार्थी (जो लेखकका साथी थिए) लाई कसरी राजनीतिक चेतना दिइयो ? उसका व्यावहारिक बाध्यता र सपना के थिए ? भन्ने कुरालाई आत्मपरक शैलीमा रोचक ढङ्गले उल्लेख गरिएको थियो । त्यतिबेलाको मेरो बालचेतनाले त्यो कथाको भाव र उद्देश्य बुझ्ने कुरै भएन । तर कथामा उल्लिखित विभिन्न ठाउँको नाम, हाम्रो गाउँले जीवनको बयान अनि पढेर के बन्ने ? भन्ने हाम्रा र हाम्रा अभिभावका सपना चाहीं मेल खाने थिए । त्यसैले ती कथाका प्रसङ्ग मलाई अझैसम्म याद आइरहन्छ । त्यस कथाका लेखक सेन अनि कथामा उल्लेखित उनको साथी को थियो होला ? मेरो जिज्ञासा यथावत थियो । समयक्रममा हामी स्कुलमा संगठित हुँदै जाँदा र गोप्य रूपमा राजनीतिक क्लास पाउँदा हाम्रा अग्रज गुरुहरूबाट कृष्ण सेनको नाम बेलाबेलामा सुन्ने गरिन्थ्यो ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा बहुदल स्थापना भयो । राजनीतिक पार्टीहरू खुला भएर आआफ्ना राजनीतिक कार्यक्रम लिएर गाउँगाउँमा पुग्न थाले । त्यसै सन्दर्भमा नेकपा (मशाल) को कार्यक्रम लिएर कृष्ण सेनको नेतृत्वमा एउटा टिम हाम्रो गाउँमा पुग्यो । हामीले पढेको रोल्पा घोडागाउँको रामेश्वरी मा.वि.को प्राङ्गणमा भएको जनसभामा कृष्ण सेनले जोडदार भाषण गर्नुभयो । दुब्लो–पातलो शरीर, भद्र र शालीन देखिने नेताले गरेको भाषण पछिसम्म पनि गाउँमा चर्चाको विषय बनेको थियो त्यतिबेला । जनतालाई सम्बोधन गरिसकेपछि आन्तरिक रूपमा उहाँले हामी केही व्यक्तिलाई राजनीतिक कक्षा दिनुभयो । त्यतिबेला नेपालमा काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा ‘वाम’ मोर्चा सम्मिलित अन्तरिम सरकार बनेको थियो । आआफ्ना विचारका राजनीतिक कार्यक्रम गर्ने क्रममा नेकपा (मशाल) ले रुकुमको सदरमुकाम मुसीकोटमा सांस्कृतिक कार्यक्रमसहितको सभा गर्दा कलाकारहरूले बन्दुक (नक्कली) सहितको नृत्य गरेको आरोपमा सरकारले सैन्य अपरेसन चलाएको थियो । वाममोर्चा सम्मिलत सरकारले गरेको उक्त सैन्य अपरेसनको विरोधमा नेकपा (मशाल) ले देशैभरि भण्डाफोर अभियान चलाएको थियो । कार्यक्रममा कृष्ण सेनले वाम र काङ उस्तै हुन् भनेर दिएको प्रशिक्षण आजैजस्तो लाग्छ ।
भौतिक रूपमा मैले कृष्ण सेनलाई पहिलोपटक देखेको, भेटेको र चिनेको त्यतिबेलै हो । उहाँको शालीनतापूर्वक सरल भाषामा आफ्ना विचारहरू राख्ने अभिव्यक्ति शैलीले म अत्यन्त प्रभावित भएकी थिएँ । उहाँ बोल्दै गर्दा मलाई मेरो बाल्यकालको ‘मेरो साथी’ लेख्ने सेन उहाँ नै हो भन्ने कुराको अड्कल काट्न अप्ठ्यारो भएन । पछि थाहा भयो, उक्त ‘हटारु’ पत्रिका उहाँहरूकै पहलमा प्रगतिशील साहित्यिक पत्रिकाका रूपमा दाङबाट निस्कने रहेछ र उक्त कथाका लेखक कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ नै हुनुहुँदो रहेछ । जब यो कुरा थाहा भयो बल्ल मैले कथाको वास्तविक भाव र उद्देश्य बुझ्न थालेँ ।
२०४८ सालमा सहिद मित्रमणि आचार्यको सम्झनामा उहाँद्वारा लेखिएको ‘शोकाञ्जली’ खण्डकाव्य पढ्ने मौका मिल्यो । त्यसपछि विभिन्न पत्रपत्रिकामा कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ का नाममा आउने हरेक रचनाहरू खोजीखोजी पढ्ने गर्थेँ म । उहाँको जनजीवनसम्म जोडिएका सुखदुःखका कथाव्यथा जनताको भावना अनि त्यसलाई बदल्ने विचारसहितको क्रान्तिकारी साहित्य रचनाले प्रभावित नहुने सायद कोही थिएन होला । जनयुद्धको तयारी तथा ग्रामीण वर्गसङ्घर्षको बेला गीतसङ्गीत र साहित्य जनतामा जागरण पैदा गराउने र वर्गसङ्घर्षको औचित्य पुष्टि गर्ने धेरै महत्वूर्ण साधन बनेका थिए । मणि थापा, पूर्ण घर्ती, कुलानन्द गिरीका गीतहरू अनि कृष्ण सेन, अमर गिरी आदिका कविता अत्यन्त चर्चित थिए त्यतिबेला । २०५२ साल फागुन १ गतेबाट जब जनयुद्धको सुरुआत भयो, त्यसपछि राज्यको दमन र क्रान्तिकारी योद्धा र जनताहरूको बलिदानको शृङ्खला पनि बढ्दै गयो । नेपाली क्रान्तिले समाजका नयाँनयाँ विषयवस्तुहरू उठान गर्दै जाँदा त्यसलाई जनताको भावना, विचार, सङ्घर्ष र मुक्तिको प्रश्नसँग जोड्दै त्याग, समर्पण र बलिदानको मूल्यबोधलाई गीतसङ्गीत र कलासाहित्यमार्फत जोड्ने र प्रचारप्रसार गर्ने काम कलाकार, साहित्यकार र पत्रकारहरूले गरे । युद्ध घनीभूत हुँदै जाँदा राज्य कति क्रूरतापूर्वक दमनमा उत्रियो भने कलाकारहरू नाच्दानाच्दै, गाउँदागाउँदै लेखक–साहित्यकारहरू लेख्दालेख्दै, पत्रकारहरू समाचार छाप्दाछाप्दै, गिरफ्तारीमा पर्नुपर्ने, हिरासत र जेलको यातना भोग्ने मात्र होइन, बेपत्ता र हत्या गरिने घटनाहरूसमेत हुन थाले । त्यसै सिलसिलामा कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ लाई पनि पटकपटक गिरफ्तार गरेर जेल हालियो । तर जेलभित्र पनि उहाँको विचार साहित्यिक कृतिमार्फत यति सशक्त बनेर आयो जसले प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको मुटु काँप्न थाल्यो । उहाँको विचारबाट अत्तालिएका क्रूर शासकहरूबाट २०५९ जेठ ६ गते उहाँलाई काठमाडौँबाट गिरफ्तार गरी बेपत्ता बनाइयो र जेठ १३ गते महेन्द्र पुलिस क्लबमा चरम यातना दिएर हत्या गरियो । तर शासकहरूले उहाँको हत्याको खबर सार्वजनिक गर्न सकेनन् । पछि घुमाउरो पाराले विभिन्न पत्रपत्रिकामार्फत उहाँको हत्याको घटनालाई बाहिर ल्याउने काम भयो । यसरी एउटा बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी निष्ठावान् क्रान्तिकारी योद्धा कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ को भौतिक जीवन समाप्त पारियो । दुस्मनहरूले सोचेका थिए होलान् इच्छुकको हत्याले क्रान्तिकारी आन्दोलन शिथिल हुनेछ, कलमहरू लेख्न बन्द हुनेछन्, सबैमा निराशा आउनेछ र उनीहरूको लुटको स्वर्गमा शान्ति छाउनेछ तर त्यसो भएन । उहाँको सहादत त क्रान्तिका लागि ऊर्जा बनेर आयो । दुस्मनको कालकोठरीभित्र उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको अदम्य साहस क्रान्तिकारी दृढता र बलिदानी भावले दुनियाँलाई क्रान्तिमा दृढतापूर्वक अविचलित भएर अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिल्यो र हजारौँ ंयोद्धाहरू उहाँको आदर्शलाई पछ्याउँदै सहिद बने ।
नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनमा एउटा विशिष्ट आदर्श बिम्बका रूपमा स्थापित भएका कृष्ण सेनलाई मैले बाल्यकालमा कथामा चिनेँ । त्यो पनि अबोध बालापनमा ‘सेन’ नामले । भौतिक रूपमा पहिलो भेट राजनीतिक कार्यक्रममा भयो । नेताकै रूपमा चिनेँ । त्यसपछिका दिनहरूमा एकदुईपटक प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष देखाभेट भयो तर कुराकानी र भलाकुसारी केही भएन । उहाँले मलाई चिन्नुभयो कि भएन थाहा छैन तर उहाँलाई मैले धेरैभन्दा धेरै साहित्यकारका रूपमा कविता र उहाँका कालजयी कृतिहरूमा चिनेँ । नेताका रूपमा विचारमा चिनेँ । पत्रकारका रूपमा जनादेश र जनदिशामा चिनेँ । त्योभन्दा पनि धेरै नेपाली क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको महान् सहिदका रूपमा चिनेँ । उहाँसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गरेका सहयात्रीहरूको बेग्लै अनुभूति होला तर उहाँलाई लाखौँकरोडौँ मित्रजन र शुभचिन्तकहरूले यसरी नै चिन्छन् होला ।
इच्छुकको बहुआयामिक व्यक्तित्वका बारेमा धेरै चर्चापरिचर्चा गर्नु जरुरी छैन किनकि नेपालको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मात्र होइन, बुर्जुवा समाजमा समेत ‘इच्छुक’ यस्तो नाम हो जुन सरलता, मानवता, निष्ठा, त्याग, समर्पण र बलिदानको उच्च आदर्शका रूपमा स्थापित छ । वैचारिक राजनीतिक साङ्गठनिक साहित्यिक, सांस्कृतिक एवम् पत्रकारिताजस्ता विविध विधा र क्षेत्रमा विचारअनुसारको व्यवहार, आदर्शअनुसारको जीवन, अधिकारभन्दा कर्तव्य, आवेगभन्दा विवेक प्रयोग गर्नसक्ने विलक्षण प्रतिभा र क्षमताका धनीका रूपमा खरो उत्रिएका सशक्त योद्धाको नाम हो कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ । आज ती महान् योद्धाले नेपाली श्रमजीवी जनता देश र साम्यवादको लक्ष्यप्रति समर्पित भई आफ्नो जीवनलाई आहुति दिएको पनि १६ वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा नेपालमा ठूलठूला राजनीतिक घटनापरिघटनाहरू घटिरहेका छन् । यहाँसम्म आउँदा नेपालमा इच्छुकको सपना पूरा गर्ने इच्छुकको व्यापार गर्ने र इच्छुकको सपनालाई तिलाञ्जली दिनेबीच सङ्घर्ष चलिरहेको छ । यतिबेला मेरो मनमस्तिष्कले एउटा प्रश्न सोधिरहेको छ, इच्छुक ! तपाईंका विचार र सिद्धान्तको रक्षाका लागि बलिदान गर्न आदेश दिनेहरू, मृत्युभित्र जीवन छ भनी सिकाउनेहरू नै आज जीवनका लागि सिद्धान्त र विचारलाई तिलाञ्जली दिँदै छाला बचाउ अभियानमा छन् । तिनैको कम्युनिस्ट शासनमा आज तपार्इंजस्तै अन्याय, अत्याचार र शोषणका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नेहरू जेलका चिसा छिँडीमा दिन काटिरहेका छन् । तपाईंकै भाषामा बाँच्नका लागि भट्टी पसल राख्न बाध्य कान्छीहरूका झुपडीमा दिनदिनै डोजर दौडिरहेका छन् । यस्तो बेलामा तपाईंको क्रान्तिकारी कवि चेतनाले कस्तो कविता लेख्थ्यो होला ?
प्रत्येक वर्ष जेठ १३ गते इच्छुकको सम्झनामा ‘इच्छुक स्मृति दिवस’ मनाउने गरिन्छ । यस वर्षको १७ औँ इच्छुक स्मृति दिवसका अवसरमा उहाँको आस्था, विचार र बलिदान भावलाई नबिर्सिने र उहाँको लक्ष्यप्रति अविचलित भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धताका साथ इच्छुकलगायत सम्पूर्ण महान् सहिदहरूप्रति इच्छुककै कालजयी कविताका केही अंशसहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली !
वास्तवमा ती सच्चा जीवन बाँचेका छन्
तिनका महान् अभिलाशाहरू
सधैँसधैँ जीवित रहनेछन्
जीवनको अन्तिम दिनसम्म पनि
जो कञ्चन र इमानदार रहे
(बन्दी र चन्द्रागिरि)
लामो अँध्यारो रातपछि
झल्मलाउने उज्यालो प्रभातजस्तै
आजको कालो अँध्यारो चिरेर
हाम्रो आस्थाको साम्यवाद
एक न एक दिन जरुर झुल्कनेछ
हाम्रो निष्ठाको बीजबाट
एक न एक दिन जरुर
नयाँ जीवनको नवाङ्कुर फुट्नेछ
र एक न एक दिन जरुर
हाम्रो सुखद र ऐश्वर्यपूर्ण भविष्यको
सुन्दर सयपत्री फुल्नेछ ।
२०७५ जेठ १६ गते बुधबार अपरान्ह ६ : २४ मा प्रकाशित
जनविद्रोहपछि म फेरि जेल जानुपर्ने हुन्छ : बालकृष्ण ढुङ्गेल
सामाजिक दलाल पुँजीवाद र सुधारको चरित्र : धर्मेन्द्र बास्तोला